Waxqabadka Waxbarashada PL 2012?
1 Jan 1, 2013 - 5:39:33 AM
Dawladda Puntland xilligan jirta waxa u buuxsamaysa afar sanno 8 ,Jan 2012 oo ku beegan markii 2009-kii hogaanka Puntland loo doortay Madaxweyne Dr,Cabdiraxman Maxamed Maxamud Farole iyo ku xigeenka Gen.Cabdisamad Cali Shire.
Radio Garowe oo inta badan barnaamijyo ka samaysa dhacdooyinka Puntland ka jira iyo Somaliyaba ayaa barnaamijyo ku aadan waxa xukuumadan u qabsoomay iyo himilooyinka ay damacsantahay inay ku talaabsato iyo caqabadaha ka horyimid waxay ka diyaarisay barnaamiyo gaar oo taxane ahaan kala socondoontaan Warsidaha Garowe Online.
Wasaarada Waxbarashada Puntland oo lagu tilmaamo kuwa ugu firfircoon waaxyaha dowladda Puntland ayaa inta badan deeqo waxbarasho gaarsiiyaa ardeyda reer Puntland ee dhamaysata Iskuulada sare.
Agaasimaha guud ee wasaarada waxbarashada Puntland Maxamed Cabdiwahaab Axmed ayaa marti ku noqdey barnaamijka Rayiga Dadweynaha ee Radio Garowe,waxana dadweynuhu ka dib markii ay dhageysteen warbixntiisa ay waydiinayaan su’aalo maankooda ka dhex guuxaya.
Dadweynaha Puntland ayaa soo dhaweeyey waxyaabaha u qabsoomey wasaarada oo in badan ay amaaneen ,waxana ay soo jeedinayaan talooyin ay u arkaan in ay yihiin kuwo wax kat araya mustaqbalka dhow horumar balaaran oo ay ku talaabsato wasaaradu.
Halkan ka dhageyso Rayiga Dadweynaha oo daadihinayo Cali Fantastic